प्रदेश १ Archives - Dna Nepal
प्रदेश १ मा थपिए चार राज्यमन्त्री ५ माघ २०७६, आईतवार १०:२९
विराटनगर, माघ ५ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेत्रधन राईले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उनले चार राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री राईले ओखलढुंगाका अम्बिर गुरुङ, इलामका रामबहादुर मगर, झापाकी जसमाया गजमेर र मोरङका..
प्रदेश १ का मन्त्रीहरु ऋणले चुर्लुम्म १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०२:४२
विराटनगर, मंसिर १३ । पत्रिकामै प्रदेश १ का सबै मन्त्री ऋणमा रहेको समाचार पनि प्रकाशित रहेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाहेक सबै मन्त्रीहरु ऋणमा रहेको देखिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण खुलाउन आनाकानी गरेको..
सुविधा मोहमा प्रदेश सरकार, ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी खरिद ११ श्रावण २०७६, शनिबार ०५:३८
विराटनगर, साउन ११ । प्रदेश १ सरकारले ठूलो रकम सवारी साधन खरिदमा खर्चेर सुविधा मोह बढाएको छ । विनियोजित रकमबाहेकको रकम समेत रकमान्तर गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा मन्त्रालयको प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा..
घरसँगै जलेर खरानी भयो ४ जनाको परिवार, राति अचानक कसरी लाग्यो आगो ? १० मंसिर २०७५, सोमबार ०२:३९
झापा, मंसिर १० । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका( ७ लाल्झोडास्थित एक घर जलेर खरानी भएको छ । घरसँगै आगोले जलेर परिवारमा रहेका ४ जनाको समेत मृत्यु भएको छ । आइतबार राति करिब ९ बजेतिर घरमा अचानक सल्किएको आगोले उक्त दुर्घटना निम्तिएको इलाका प्रहरी..
थाइल्यान्ड हिँडेका मुख्यमन्त्री किन सुटुक्क अमेरिका ? २५ कार्तिक २०७५, आईतवार ०२:१८
काठमाण्डौं, कार्तिक २५ । उपचार गर्न थाइल्यान्ड जान्छु भनेर हिँडेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सुटुक्क अमेरिका पुगेका छन् । प्रदेश छाडी देशभित्रै पनि हिँडडुल गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । कात्तिक १६ गते बैंकक प्रस्थान..